ဘုရား တရား သိတတ်ပြီး သူမ နဲ့ စိတ်ချင်းတူတဲ့ သမီးလေးကြောင့် အရမ်းပီတိဖြစ်နေရတဲ့ သက်မွန်မြင့် – Cele Oscar
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး သက်မွန်မြင့် ကတော့ အခုလို ကိုဗစ် ရောဂါတွေကြောင့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အားလပ်ချိန် တွေမှာ ဘုရား တရား ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်က သူမရဲ့ သားသမီး တွေကိုလည်း အခုလို ကလေး ဘဝကတည်းက ဘုရား တရားကိုင်းရှိုင်း စေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အငယ်ဆုံး သမီးလေး ကလည်း သက်မွန် နဲ့ အတူ တရားထိုင်လေ့ ရှိတာကတော့ ပရိသတ် တွေကို အချစ်ပို မိစေမှာပါ။
သက်မွန်က မကြာ သေးတဲ့ နာရီပိုင်း အချိန်လောက်က သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် အကောင့်မှာ သမီးလေး နဲ့ အတူ တရားထိုင် နေတဲ့ ပုံလေး တွေကို ဝေမျှလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေ အပြင် ” တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသလိုပေါ့…၉ ရက် တရား စခန်း( အိမ်ကနေ zoomနဲ့) ဝင်တော့ သူလိုက်ထိုင်တာ.. သက်မွန် ကိုယ်တိုင် လည်း မေမေက ဘုရား တရား အရမ်း လုပ်တော့ ကိုယ်ပါ စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ဖြစ်တယ်.. ကလေး ဘဝထဲက မေမေ ပုတီး စိပ်ရင် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ပြီး မေမေ သင်ပေးတာ လိုက် လုပ်တာ..အနုပညာ အလုပ်စ လုပ်တော့လည်း ဘုရားမှ တပါး အားကိုးရာ မရှိခဲ့ တော့ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်..
ခု အလုပ် မလုပ်ရ တော့ အိမ်မှာ နေရတဲ့ ချိန် အိမ်ကနေ တရား စခန်းဝင်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ ဝင်ဖြစ်တယ်… ဆရာ ကေသာဦး ရဲ့ သဲအင်းဂူ “သေနည်းသင်”ဆိုတော့ ပို စိတ်ဝင် စားသွားတာ.. သေမလို ဖြစ်တုန်းက စိတ် တွေယောက် ယက်ခတ်ခဲ့တာကိုး.. ဝေဒနာ နဲ့ စိတ်ကို ဘယ်မှာ အာရုံပြု ရမလဲဆိုတာ သိချင်နေခဲ့တာ.. ခုတော့ သိပြီ.. ကိုယ် ဆက်ပြီး ကျင့်ကြံ သွားဖို့ပဲ လိုတော့တယ်. ကျင့်သား မရရင် ယောက်ယက် က ခတ်ဦးမှာပဲ ” ဆိုပြီး ရေးသား လာတာပါ။ သက်မွန်နဲ့ ရုပ်ဆင်ရုံသာမကပဲ စိတ်ဓာတ်လေးပါ တူနေတဲ့ သမီးငယ်လေး နဲ့ အတူ ပုံလေး တွေကို ပရိသတ်တွေထံ ပြန်လည် တင်ဆက် ပေးပါတယ်နော်။
သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ခြောလေး သကျမှနျမွငျ့ ကတော့ အခုလို ကိုဗဈ ရောဂါတှကွေောငျ့ အနုပညာ လှုပျရှားမှု အားလပျခြိနျ တှမှော ဘုရား တရား ကို တစိုကျမတျမတျ လုပျကိုငျ နတောဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျက သူမရဲ့ သားသမီး တှကေိုလညျး အခုလို ကလေး ဘဝကတညျးက ဘုရား တရားကိုငျးရှိုငျး စတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အငယျဆုံး သမီးလေး ကလညျး သကျမှနျ နဲ့ အတူ တရားထိုငျလေ့ ရှိတာကတော့ ပရိသတျ တှကေို အခဈြပို မိစမှောပါ။
သကျမှနျက မကွာ သေးတဲ့ နာရီပိုငျး အခြိနျလောကျက သူမရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ ဖဘှေ့တျ အကောငျ့မှာ သမီးလေး နဲ့ အတူ တရားထိုငျ နတေဲ့ ပုံလေး တှကေို ဝမြှေလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ပုံလေးတှေ အပွငျ ” တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသလိုပေါ့…၉ ရကျ တရား စခနျး( အိမျကနေ zoomနဲ့) ဝငျတော့ သူလိုကျထိုငျတာ.. သကျမှနျ ကိုယျတိုငျ လညျး မမေကေ ဘုရား တရား အရမျး လုပျတော့ ကိုယျပါ စိတျနှဈပွီး လုပျဖွဈတယျ.. ကလေး ဘဝထဲက မမေေ ပုတီး စိပျရငျ စိတျဝငျတစား ကွညျ့ပွီး မမေေ သငျပေးတာ လိုကျ လုပျတာ..အနုပညာ အလုပျစ လုပျတော့လညျး ဘုရားမှ တပါး အားကိုးရာ မရှိခဲ့ တော့ ပိုလုပျဖွဈတယျ..
ခု အလုပျ မလုပျရ တော့ အိမျမှာ နရေတဲ့ ခြိနျ အိမျကနေ တရား စခနျးဝငျလို့ ရတယျဆိုတော့ ဝငျဖွဈတယျ… ဆရာ ကသောဦး ရဲ့ သဲအငျးဂူ “သနေညျးသငျ”ဆိုတော့ ပို စိတျဝငျ စားသှားတာ.. သမေလို ဖွဈတုနျးက စိတျ တှယေောကျ ယကျခတျခဲ့တာကိုး.. ဝဒေနာ နဲ့ စိတျကို ဘယျမှာ အာရုံပွု ရမလဲဆိုတာ သိခငျြနခေဲ့တာ.. ခုတော့ သိပွီ.. ကိုယျ ဆကျပွီး ကငျြ့ကွံ သှားဖို့ပဲ လိုတော့တယျ. ကငျြ့သား မရရငျ ယောကျယကျ က ခတျဦးမှာပဲ ” ဆိုပွီး ရေးသား လာတာပါ။ သကျမှနျနဲ့ ရုပျဆငျရုံသာမကပဲ စိတျဓာတျလေးပါ တူနတေဲ့ သမီးငယျလေး နဲ့ အတူ ပုံလေး တှကေို ပရိသတျတှထေံ ပွနျလညျ တငျဆကျ ပေးပါတယျနျော။